बजेटमा वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीका अपेक्षा «
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेटको तयारी भइरहेको छ । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन पनि सुरु भइसकेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेट कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आउने बताएका छन् । तरलताको अभावका कारण देशलाई आर्थिक संकटबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थविद्हरूमा पनि चिन्तन र विमर्शहरू सुरु भएको छ । सरकारले आम नागरिकसँग पनि सुझाव माग गरेको छ । सरकारले माग गरेका सुझाव नागरिकस्तरबाट दिएमा त्यसको कति सम्बोधन हुन्छ र कार्यान्वयन होला भन्नेमा भने अझैसम्म आमनागरिक विश्वस्त हुन सकिरहेको छ । तर पनि देशको आर्थिक समृद्धि र विकासमा नागरिकले लिएको चिन्ता सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।
पूर्वबजेट छलफल तथा बजेट निर्माणको सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थाहरूसँग पनि औपचारिक छलफल अन्तक्र्रियाहरू गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । यसपटक पनि बजेटको विषयमा छलफल, अन्तक्र्रियाहरू भए । हरेक वर्ष गरिने पूर्वबजेट छलफलमा सरकारलाई धेरै सुझाव पनि जाने गरेको छ । त्यही सुझावहरू कार्यान्वनयमा नआउँदा सरकारले लिने सुझाव व्यर्थमा लिएको भन्नेहरू पनि छन् । देशको अर्थतन्त्र र सरकारले लिने आर्थिक नीति तथा ल्याउने बजेटमा मुख्य चासो भनेको निजी क्षेत्रको रहन्छ । निजी क्षेत्रले राज्य सधैं उद्योग व्यवसायीमैत्री, करमैत्री, भन्सारमैत्री होस् भन्ने अपेक्षा र चाहना गरेका हुन्छन् । वीरगन्ज राज्यको कुल राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र हो । त्यसले पनि यहाँका निजी क्षेत्र सरकारले ल्याउने बजेट चासोका साथ अध्ययन गर्ने, नजिकबाट नियाल्ने गरेका छन् । वीरगन्जका निजी क्षेत्रको आगामी वर्षको बजेटमा के अपेक्षा छ ? भन्ने विषयमा कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सारः
बजेट घटाएर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश
बजेटको आकार पहिलेको भन्दा कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत कम हुनुपर्छ । काल्पनिक बजेट बनाउने अर्थात् खर्च गर्नै नसकिने खालको बजेट हुनु हुँदैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट हुनुपर्छ । निर्यातमा बल पु¥याउने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने खालको बजेट हुनुपर्छ । कृषिजन्य उत्पादनको सही बजारीकरण हुने र औद्योगीकरण हुने खालको परियोजना आउनुपर्छ । नेपालका प्रत्येक औद्योगिक नगरीमा एउटा संरक्षित नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हुनुपर्छ । आपूर्तिको मुख्य माध्यम वा नाका भनेको वीरगन्ज हो । त्यसैले एउटा ट्रान्सपोर्ट नगरको व्यवस्था हुनुपर्छ । विभिन्न भत्ताको नाममा नगद बाँड्ने कामले वितरणमुखी बनाएको छ । यसलाई लाभ दिने खालको लक्षित कुनै अर्को कुनै परियोजना लिएर आउनुपर्छ । नगद वितरण गर्ने काम यो लोकप्रियताको लागि वा पार्टीका कार्यकर्ताहरूको लाभका लागि हो । जनताको हितमा यसले काम गर्दैन । राजस्वको चुहावट रोक्नलाई आयकरको फ्ल्याट अधिकतम २० प्रतिशतभन्दा बढी जान दिनु हुँदैन । आय करको छुटको सीमालाई अहिलेको भन्दा ठीक दोब्बर गर्नुपर्छ । साढे ४ लाख रुपैयाँ त जसले पनि कमाउँछ अहिले । अर्को सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरो कर्मचारी वर्गहरूलाई घाडो भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान दिने कर्मचारीहरूको आयकर कम हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान दिनेहरूको करमा खासै ध्यान दिनु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा ११ प्रतिशत र फेरि यता पनि आयकर दिने भन्यो भने कसरी जान्छ । जानै चाहँदैन । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । करसँग सम्बन्धित धेरै विषय छन् । कार्यान्वयन तहमा जाने हो भने बजेटले सम्बोधन त गर्दैन । तर पनि बजेटमा सुनाउनुचाहिँ पर्छ । द्रुतमार्गको कुरा छ । बजेट छुट्यो बन्दैन । त्यसलाई न्यूनतम आधारलाई लक्षित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पनि केही ठोस पाइला चाल्नुपर्छ । हुलाकी सडकमार्फत जारी कामहरू यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । ठेकेदारहरूले अनावश्यक रूपमा लिएर लम्ब्याउने गरेका छन् । उनीहरूलाई नयाँ ठेक्का दिनु भएन । कालोसूचीमा राखेर काम गर्नुपर्छ । सरकारले माथिदेखि तलसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजेटले यसलाई कति सम्बोधन गर्न सक्छ ?
करमैत्री र भन्सार प्रशासनमैत्री बजेट आउनुपर्छ
देशको आर्थिक राजधानीले बजेटको चासो स्वाभाविक रूपमा रहन्छ । त्यसैले आर्थिक राजधानीका लागि केन्द्रित गरेर पनि बजेट आउनु आवश्यक छ । बजेट व्यक्तिगतभन्दा पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सानो आकारको बजेट आउने गरेको छ । आगामी बजेट विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नै बजेट आउनुपर्छ । द्रुतमार्ग जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । एउटा पूर्ण ढाँचाको साथमा यस क्षेत्रका औद्योगिक विकासका लागि बजेट आउनुपर्छ । विशेष गरी बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने हाम्रो धेरै पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका छौं । औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास भएमा उद्योग–प्रतिष्ठानहरूमा देखिने विवाद र समस्याहरूको समाधानमा सहज हुन्छ भन्ने हाम्रा मान्यता हो । उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्यो भने स्वाभाविक रूपमा उद्योगहरूमा लगानी आउन सक्छ । त्यसबाहेक यस क्षेत्रलाई हामीले नेपालकै विकसित सहरका रूपमा विकास गर्न चाहिरहेका छौं । स्मार्ट सिटीको रूपमा हेर्न चाहन्छौं । वीरगन्जसहित आसपासका क्षेत्रहरूलाई समेटेर एउटा ‘ग्रेटर वीरगन्ज’ को आवधारणामा स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने गरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । आमनागरिकको करको सन्दर्भमा साना करदाताहरूलाई झन्झटिलो भएको छ । ५ करोडसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने उद्योग तथा व्यापारको कर लिने र त्यसपछि बैंक खाताबाट नै काट्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आमनागरिक करको दायरामा पनि आउने र मिसम्याच पनि नहुने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले जति पनि ननफाइलरहरू छन्, बन्द हुन्छन् । अर्को भ्याटमा पनि दुई तह हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अति आवश्यक वस्तुहरूमा पनि १३ प्रतिशत र विलासिताका वस्तुहरूमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट व्यावहारिक भएन । यसैले अति आवश्यक वस्तुहरूमा ५ प्रतिशत र विलासिताका वस्तुहरूमा १० प्रतिशत भ्याटमा दरबन्दी हुनुपर्छ । भन्सारमा जति पनि उद्योग र ट्रेडिङहरूले बिल बुझाउने गरेका छन्, त्यसको मान्यता दिनुपर्छ । हुन्डी कारोबार, अन्डर बिलिङ, ओभर बिलिङमा सामानहरू पाइरहेको छ । त्यो सबै बन्द हुन्छ । जसरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जस्तै स्वघोषणा आफै घोषणा गर्ने, आफै फाइल बनाउने र आफैं तिर्ने गरेका छौं । त्योपछि सरकारले कुनै पनि बेला चेकजाँच गर्छ । अब स्वनिरीक्षण गर्ने समय पनि हो । अहिले आएको बिललाई मान्यता दिने र पछि चेकजाँच गर्ने बेलामा त्यस्तो कुनै बिल आउँछ, त्यसको कारबाही हुनुपर्छ । अर्को वीरगन्जले बारम्बार औद्योगिक करिडोरमा औद्योगिक सुरक्षा बल अहिले हटाएको छ । यसलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक आईसीपी र आईसीडीबाहेक अर्को डष्ट कार्गोका लागि छुट्टै नयाँ आईसीडीको आवश्यकता छ । निजी क्षेत्र करमैत्री, भन्सार प्रशासनमैत्री हुनुपर्छ । भयरहित वातावरणमा व्यापार–व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने निकाय धेरै भए । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार, आन्तरिक राजस्व, नापतौलजस्ता धेरै निकायले निगरानी गर्छन् । यसले गर्दा उद्योगी–व्यापारीहरू अलिकति निरुत्साहित हुने गरेका छन् । केही निश्चित निकायहरू भन्सार र राजस्व अनुसन्धानले मात्रै नियमन गर्ने गरी अन्य निकायलाई भने अधिकार दिनु हुँदैन । सबै नियमनकारी निकायले निजी क्षेत्रलाई नै त्रास सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था हटाउनुपर्छ । प्रोत्साहनको नाममा व्यवसायी दुःख दिने काम भएको छ ।
सांसद विकास कोष खारेज हुनुपर्छ
संसदीय कोषमा बजेट राख्नु हुन्न । मेरो क्लियर धारणा के छ भने मैले बजेटको आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ देखि नै खारेज हुनुपर्छ भनेर माग राख्दै आएका छौं । जब ०६७/०६८ को बजेट कुनै पनि हालतमा बजेट संसदीय विकास कोषमा बजेट हाल्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्दा पनि एमालेकै सरकारको पालामा सांसदहरू नै गएर एमालेका उपाध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर संसदीय विकास कोष हटाउनु हुँदैन भनेर लबिङ्ग गरे । उहाँहरूले प्रस्ताव राख्दा संसदीय विकास कोष प्रत्येक संसद्लाई ६ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसलाई घटाएर ३ करोड रुपैयाँमा ल्याइयो । हाम्रो सौभाग्य के भयो भने जब आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट आयो त्यतिखेर केपी ओलीले संसद विघटन ग-यो । संसद विघटनकै अवस्थामा बजेट आएकोले ०७८/०७९ मा संसदीय विकास कोष रहेन । त्यसैले हाम्रो के मान्यता हो भने संसद्को काम कानुन बनाउने, यसको वृत्ति विकास र समृद्ध बनाउनका लागि कार्यान्वयन भयो कि भएन ? हेर्ने, अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित समितिबाट निर्देशन दिने काम हो । त्यसैले संसदीय विकास कोषमा बजेट छु्ट्याउनु हुँदैन । किनकि संसदीय विकास कोषको जति पनि रकम छ, विकासमुखी काममा नभई अविकासमा काम भइरहेको छ । त्यो पैसा प्रवेशद्वार, अलिअलि धार्मिक मठमन्दिरको निर्माणमा खर्च हुन्छ । अलिअलि धर्मशालाहरूको निर्माणमा खर्च हुन्छ । जुन पछि गएर गाईगोठजस्तै बन्न जान्छ । त्यो उत्पादनमूलक काम भएन । त्यसैले संसद्को कामै होइन विकास खर्च लाउने, त्यसकारण संसदीय विकास कोष खारेज हुनैपर्छ । अर्को कुरा, सरकारले वितरणमुखी बजेट बनाउँदै आएको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने वितरणमुखी बजेट बनाएर खर्च गर्न नसक्ने शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइरहेका छन् । त्यसैले खर्च गर्न सक्ने शीर्षकमा मात्रै बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ, जसले गर्दा बजेटको आकार पनि सानो हुन्छ । बजेटको आकार सानो भएपछि बजेट घाटा पनि कम हुन्छ । हामी अहिले बजेट ठूलो बनाउँछौं । तीन महिना, छ महिनापछि फेरि संशोधन गरेर सानो बनाउँछौं । यता राजस्वको लक्ष्य पुगिरहेको हुँदैन । उता बजेट घाटा बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले हामीले जति राजस्व उठाउन सक्छौं, त्यसलाई मध्यनजर गरेर खर्च गर्न सक्ने, विकास गर्न सक्ने योजनाका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र र सार्क राष्ट्रहरूको तुलनामा हाम्रो व्यक्ति कर अत्यधिक धेरै छ । यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत करको दायरा बढाउनुपर्छ । नेपालमा अहिले पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकिरहेको छैन । यसका लागि कच्चा पदार्थका वस्तुहरूको कम र तयारी वस्तुहरूको कर बढाउनुपर्छ । त्यससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, पर्यटन लगायतका सेवामूलक संस्थाहरूलाई उद्योगसरह नै कर दर २५ प्रतिशत छ । त्यसलाई हटाएर उद्योगसरह नै कर लियो भने आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ । प्रत्येक प्रदेशमा उत्पादन विशेषताको आधारमा उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रदेश नम्बर १ मा चिया उत्पादन बढी छ, त्यसमा चिया खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने । मधेस प्रदेशमा धान, गहुँको उत्पादन हुन्छ यहाँ कृषि आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गर्ने । नेपालगन्जमा भुइँकटहर बढी उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ जुस प्रशोधन गर्ने खालका उद्योगहरूको स्थापनालगायतका कुराहरू छन् । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशमा उत्पादन विशेषताका आधारमा उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ । अर्को, झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक वैदेशिक अध्ययनका लागि औपचारिक माध्यमबाट बिदेसिने गरेको छ । २० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा पढाइको नाममा जाने गरेको छ । त्यो किन भने सरकारले निजी क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिन रोकेको छ । नेपालका प्रत्येक सहरहरूमा प्रत्येक विषयको अध्ययन गर्ने/गराउने गरी सम्बन्धन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विगत तीन–चार वर्षदेखि निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिइरहेको छैन । नेपालमा सम्बन्धन खुला गरेर निजी विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय कलेजहरू खोल्नका लागि सम्बन्धन दिने हो भने अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम पनि रोक्न सकिन्छ । यति कुरामा ध्यान दियो भने मलाई लाग्छ, नेपालको बजेट घाटा पनि हुँदैन । खर्च पनि गर्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य–शिक्षा र कृषि र पारवहनमा जोड दिनुपर्छ
बजेटमा सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि राष्ट्रिय मुद्दाहरू केके हुन्, त्यसको छनोट दिनुपर्छ । हाम्रो आर्थिक अवस्था निकै खस्किएको अवस्था छ । यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्छ । अहिले विदेशी पर्यटक आउने एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल छ । तर, हाम्रो दक्षिण क्षेत्रको सीमामा १७ सय किलोमिटरसम्म पर्यटक आउने नाका हो । रेलसञ्जाल, सडक, हवाई मार्ग बढ्दो क्रममा छ । हाम्रोतिर पुरानै पद्धतिमा छौं । यसलाई ट्विन बोर्डर, ह्याप्पी बोर्डरका रूपमा विकास गरेर भन्सारमा आउँदा छिटोछरितो काम गरिदिने अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अवधारणाको विकास गर्न सक्यौं भने त्रिभुवन विमानस्थलबाट जति आउँछ त्योभन्दा बढी पर्यटक आउन सक्छन् । भारतको पनि विदेशी पैसा नै हो । तर, नेपालमा भारतीय रुपैयाँ लिएर आयो भने जेल जानुपर्ने अवस्था छ । सीमा नाकामा त्यस्तो अवरोध हुनु भएन । दुवैतर्फ समान व्यवहार हुनुपर्छ । यस्ता खालका नीतिहरू भयो भने उताका मान्छेहरू खाना खान, नास्ता खान पनि नेपालमै आउन सक्छन् । यो बजेटमा सरकारले सीमाको अर्थतन्त्र राम्रो हुने ल्याओस् । सीमाक्षेत्रमा आधा जनसंख्या बसोबास गर्छन् । त्यसमा पनि निम्न वर्गको बसोबास रहेको छ । १ अर्बको बजेट छ भने कति वर्षमा बनाउने ? एक वर्षमा बनाउने हो भने १ अर्ब नै बजेट विनियोजन गर्नु । जति काम गर्नु छ, त्यतिमै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । कनिकाजस्तो बजेट नछरेर एउटै परियोजनामा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा पारवहनको ठूलो समस्या छ । भारतको रक्सौल, हल्दिया, कोलकातालगायतका स्थानमा हाम्रो जग्गा छ । महिनाको लाखौं रुपैयाँ त्यहाँ रेखदेख गर्ने कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च भइरहेको छ । तर, त्यसबाट नेपालले केही उपलब्धि लिन सकेको छैन । उपयोगविहीन छ । यसलाई हामीले नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेडलाई सार्वजनिक, निजी, साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गर्न सकियो भने ड्राइपोर्टबाट कोलकातासम्म सामान ढुवानीका लागि रेल सञ्चालन पनि गर्न सकिन्छ । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिजस्ता संस्थाहरूलाई प्राधिकरणको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । स्वायत्त निकाय हुनुपर्छ । वाणिज्य मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको छ । यसले केही काम गर्न सक्दैन । नेपाली ट्रकहरूलाई भारतको रिभर पोर्टसम्म जाने सुविधा बिनाखर्च पु-याउने पहल गर्नुपर्छ । नेपालमा ढुवानी भाडा महँगो छ । आन्तरिक कार्गो ढुवानीको खर्च घटाउनका लागि राजमार्गहरूको विस्तार गर्नुपर्छ । अहिले विद्युतीय बसहरू आइसकेका छन्, ट्रकहरूको पनि कुरा आउनुपर्छ । अर्कोचाहिँ एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) बाट यात्रु र मालवस्तुहरू दुवैलाई आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले यात्रुहरूलाई आउन दिएको छैन । कृषिक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ५०–१०० बिघा जग्गालाई एकीकृत गरेर कृषि औद्योगीकरण, एक गाउँ एक उत्पादन, कृषिको अधिकृत बिक्री बजारहरूको व्यवस्था, रासायनिक मलखादको समस्याहरू छन्, यसको सहज उपलब्धता, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि तथा पारवहन यी चारैवटामा सरकारले बजेटमा ध्यान दिनुपर्छ । यो ठूलो क्षेत्र हो । यसको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञहरूसहितको अध्ययन समिति बनाउने र निजी क्षेत्रको सहभागितामा आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।